Ikhoyili yensimbi engagqwali egoqiwe eshisayo Abakhiqizi - I-coil yensimbi engagqwali eshisiwe efektri, abahlinzeki
I-430 iyinsimbi engagqwali ye-ferritic, i-430 16Cr uhlobo olumele insimbi ye-ferritic, isilinganiso sokunwetshwa okushisayo, ukuhleleka okuhle kakhulu nokumelana ne-oxidation. Izisetshenziswa ezingamelana nokushisa, okokushisa, okokusebenza kwasendlini, uthayiphe izinto zokusika ezi-2, amasinki ekhishi, izinto zokusika zangaphandle, amabhawodi, amantongomane, izinduku ze-CD, izikrini. Ngenxa yokuqukethwe kwayo kwe-chromium, ibizwa nangokuthi i-18/0 noma i-18-0. Uma kuqhathaniswa no-18/8 no-18/10, okuqukethwe kwe-chromium kuncane kakhulu futhi ubunzima buyancipha ngokufanele.
Ikhoyili yensimbi engagqwali engu-410 eshisiwe inokumelana nokugqwala okuhle nokungasebenzi kahle kwayo. Kuzoqina ngemuva kokwelashwa kokushisa. Ngokuvamile kusetshenziselwa ukwenza amathuluzi we-blade ne-valve. Insimbi engagqwali engu-410 inokumelana okuhle nokugqwala nokusebenza kwemishini. Kuyinsimbi yensimbi ejwayelekile kanye nensimbi yensimbi yokusika. I-410S ibanga lensimbi elithuthukisa ukumelana nokugqwala nokuqina kwensimbi engu-410.
Insimbi engagqwali engu-321 iyinsimbi enamandla amakhulu, emelana kakhulu namazinga okushisa aphezulu kuno-316L. Inokumelana okungcono kokugqwala kuma-organic organic ekugxileni okuhlukile nasemazingeni okushisa ahlukahlukene, ikakhulukazi kwimidiya ye-oxidizing. Insimbi engagqwali engama-321 ivame ukusetshenziswa ekwenziweni kwamapayipi, iziqukathi ezingamelana ne-asidi kanye nemishini emelana nokugqoka.
Insimbi engagqwali engamelana nokushisa okuphezulu, eyaziwa nangokuthi i-310S (0Cr25Ni20) insimbi engagqwali, iyinsimbi engagqwali ye-austenitic chromium-nickel, inokumelana okuhle kwe-oxidation, ukumelana nokugqwala, ngoba iphesenti eliphakeme le-chromium ne-nickel, ngakho-ke lokho kunamandla amakhulu okuhamba, qhubeka nokusebenza emazingeni okushisa aphezulu, ukumelana nokushisa okuphezulu okuhle.
Insimbi engagqwali engu-201 inokumelana okuthile kwe-asidi ne-alkali, ukuminyana okuphezulu, okupholishiwe ngaphandle kwamabhamuza, futhi akukho zikhonkwane. Kuyinto esezingeni eliphakeme yokukhiqizwa kwamacala ahlukahlukene wokubuka namacala wokubuka.